PPS ပစ္စည်းက Round နှစ်ချက် Hole လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်လျှော် Tag ကို, PPS Material High Temperature Laundry Tag, PPS Material Round Double Hole UHF Washing Tag, PPS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်လျှော် Tag ကို
 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » ရေချိုးခန်း Tag ကို
PPS ပစ္စည်းက Round နှစ်ချက် Hole လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်လျှော် Tag ကို, PPS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်လျှော် Tag ကို
ရေချိုးခန်း Tag ကို PPS Material High Temperature Laundry Tag, PPS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်လျှော် Tag ကို, PPS ပစ္စည်းက Round နှစ်ချက် Hole လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်လျှော် Tag ကို, PPS Material Round Double Hole UHF Washing Tag
Selectable frequency: LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF
အရွယ်: Ф15 / 17/20/22 / 25.5 / 26mm သို့မဟုတ်ထုံးစံ
protocol စံ: EPC CLASS 1 GEN 2, ISO ကို 18000-6C
မှတ်ဉာဏ်: 96-496-bits EPC ဧရိယာ / 2K အသုံးပြုသူဧရိယာ
အဝေးသင် Read: 0.5~2မီလီယံ, လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်, အင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ကဒ်စာဖတ်သူကို
အချိန် Read: 0.01ဒေါ်
ခံနိုငျရညျရေးရန်: 100,000 ကြိမ်
ပစ္စည်း: PPS (စိတ်ကြိုက်)
အရောင်: Black က, မီးခိုးရောင်, အပြာရောင်သို့မဟုတ်ဖေါ်ပြပေးထားသည့်
အလေးချိန်: 2ဆ(0.1g ±)
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတန်း: IP67 / IP68
ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်းစမ်းသပ်: 20℃, 24 နာရီ,2မီတာနက်ရှိုင်းသော (အဆိုပါဖတ်ပြီးသား / Write စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး)
ဓာတုစမ်းသပ်မှု: အရောင်ချွတ်အရောင်တင် / caustic soda (20℃ / 10 နာရီ (ယင်းအပြင်ပန်းကိုထိခိုက်နှငျ့ / ရေးစွမ်းဆောင်မှုကိုဖတ်ပါဘူး)
တုန်ခါမှုစမ်းသပ်: တုန်ခါမှုကြိမ်နှုန်း 34Hz, တုန်ခါမှုအစွမ်းသတ္တိကို 6mm / နာရီ (ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မရှိ, ဒါကိုတော့သို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု)
အပူချိန်စမ်းသပ်: -25℃သို့မဟုတ် + 120 ℃ / 1000 နာရီ; +160℃ / 35 နာရီ; +220℃ / စက္ကန့် 30
Suitable for RFID frequency: LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF.
ဓာတု Resistance: ရေချိုးခန်းသုံးနှင့်ခြောက်သွေ့သောလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောပုံမှန်ဓာတုပစ္စည်း.
I am interested in your product PPS Material Round Double Hole UHF Laundry Tag, PPS ပစ္စည်းအမြင့်အပူချိန်လျှော် Tag ကို
prev: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester လျှော် Tag ကို, polyester အဝတ်လျှော် Tag ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester လျှော် Tag ကို, polyester အဝတ်လျှော် Tag ကို
RFID အမြင့်အပူချိန်အဝတ်လျှော် Tag ကို, RFID အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Tag ကို, မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Epoxy ဗဓေလသစ် Tag ကို
PPS ပစ္စည်းအဝတ်လျှော် Tag ကိုက Round RFID
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ဖျ Silicon အဝတ်လျှော် Tag ကို